Vakasaina vaviri vatsva vanobatana neApple akateedzana naJennifer Aniston naReese Witherspoon | IPhone nhau
Vakasaina vaviri vatsva vanobatana neApple akateedzana naJennifer Aniston naReese Witherspoon
Apple yanga ichishanda pane yayo yega vhidhiyo sevhisi kweanenge makore maviri, iyo iyo yainoda kuisa musoro wayo zvizere mune ino chikamu. Mukufunga, zvinogona kuita senge inhanho inotevera inonzwisisika mushure mekuzviita mumusika wemimhanzi wekutenderera neApple Music, asi kusiyana neyekupedzisira, Iwe unofanirwa kugadzira zvako zvemukati kana iwe uchida kuve sarudzo yekufunga.
Zvemukati mekushambadzira vhidhiyo sevhisi zvinowanzo kuve, kazhinji, chikonzero chesarudzo nevashandisi Paanomubatira, HBO ine Game of Thrones uye Netflix ine zvimwe zvese, zvirinani kusvikira gore rinouya Disney yatangisawo yayo yega vhidhiyo sevhisi uye inopera kunze kweDisney's catalog (Marvel, Star Wars…)
Chimwe chezvinhu zvinokwezva izvo Apple's yekumhanyisa vhidhiyo sevhisi ichatipa isu inogona kuwanikwa mune Uri Kurara here? pamwe neyemukomana anotamba naJennifer Aniston naReese Witherspoon, nhevedzano yakaona wedzera vatambi nekuwedzera kwaBilly Crudup naGugu Mbatha-Raw sezvakataurwa nechinyorwa Variety.
Billy Cudrup achatamba chinzvimbo chaCory Ellison, director director weneterevhizheni imwe chete, ukuwo Gugu achange ari director tarenda wemangwanani showa imwecheteyo terevhizheni network. Panguva ino, kunze kwezvikamu zvakateedzana Uri Kurara Here? uye Nhau Dzinoshamisa, zvimwe zvishoma zvatinoziva nezvemazita akateedzana iyo Apple iri kugadzira.
Isu hatizivewo kuti mutengo wekutanga webasa iri ungave chii, sevhisi iyo maererano nerunyerekupe rwazvino inogona kuve yemahara zvachose kune vese vashandisi vane Apple account, zvirinani kusvikira yagona kukura yakakura zvakakwana kuti ive imwe nzira kune ekumhanyisa greats.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Vakasaina vaviri vatsva vanobatana neApple akateedzana naJennifer Aniston naReese Witherspoon
HomePod vs. Amazon Echo, vakatarisana
Aya ndiwo mashandiro matsva eWhatsApp Stickers